Mfoniniyɛ Adwumayɛbea, U.S.A.
Betel yɛ Hebri din a ɛkyerɛ “Onyankopɔn Fie.” (Genesis 28:17, 19) Ɛyɛ din a ɛfata ma adan a Yehowa Adansefo asisi wɔ wiase nyinaa a ɛhɔ na wofi hwɛ asɛnka adwuma no so na wɔde mmoa ma no. Akwankyerɛ Kuw no som wɔ wiase nyinaa adwumayɛbea ti a ɛwɔ New York State, U.S.A. no, na ɛhɔ na wofi hwɛ Betel afie a ɛwɔ aman pii so no so. Sɛ́ kuw no, wɔfrɛ wɔn a wɔsom wɔ mmeae a ɛte saa no Betel abusua. Wɔte sɛ abusua, wɔte faako, wɔbom yɛ adwuma, wodidi bom, na wɔde biakoyɛ bom sua Bible no.—Dwom 133:1.
Betel yɛ beae soronko a abusua no mufo da ahofama adi. Wɔ Betel fie biara mu no, wubehu Kristofo mmarima ne mmea a wɔatu wɔn ho ama reyɛ Onyankopɔn apɛde, na wɔde wɔn bere nyinaa reyɛ Ahenni adwuma no. (Mateo 6:33) Wɔn mu biara nnye akatua, na mmom wɔma wɔn aduan ne dabere ne sika kakra a wɔde totɔ wɔn ho nneɛma nketenkete. Obiara a ɔwɔ Betel wɔ adwuma a ɔyɛ; ebinom yɛ adwuma wɔ ɔfese, gyaade, anaa adidibea. Afoforo yɛ adwuma wɔ baabi a wotintim anaa wɔpam nhoma, baabi a wosi nneɛma, ne baabi a wosiesie mfiri. Ebinom nso siesie adan mu anaa wɔyɛ nnwuma foforo.
Betel yɛ beae a wɔyɛ adwumaden de boa Ahenni no ho asɛm a yɛreka no. Betel abusua biara botae titiriw ne sɛ wɔbɛma nnipa pii ate nokware a ɛwɔ Bible mu no ho asɛm. Ɛho nhwɛso biako ne nhomawa yi. Akwankyerɛ Kuw no na ɛhwɛ ma wɔkyerɛwee, na wɔde faa kɔmputa so kɔmaa akuw ɔhaha pii a wɔkyerɛ nhoma ase a wɔwɔ wiase nyinaa no. Wɔde mfiri a etintim nhoma ntɛmntɛm na etintimii wɔ Betel afie no bi mu, na wɔde menaa asafo ahorow bɛboro 110,000. Wɔ adwuma yi fã biara mu no, Betel mmusua boa kɛse ma wɔyɛ adwuma a egye ntɛmpɛ sen biara a ɛno ne asɛmpaka adwuma no.—Marko 13:10.
Henanom na wɔsom wɔ Betel, na ɔkwan bɛn so na wɔhwɛ wɔn?
Adwuma a egye ntɛmpɛ bɛn na Betel fie biara boa?
Video: Asɛnka Adwuma a Yɛreyɛ Wɔ Wiase Nyinaa
Hwɛ nea enti a yɛde nnɔnhwerew ɔpepepem bebree ka asɛmpa no wɔ kasa pii mu saa.